#NORIKA: Soo Koobid Xilliga iibka ee 2019-20 - PotatoSystem
#NORIKA: Soo Koobid Xilliga iibka ee 2019-20 iyo qorshayaasha xagaaga
Jun 26, 08:19
в Wararka Ruushka, Injineerinka / Teknolojiyada
Xilliga 2019/20 ee shirkadda NORICA-SLAVIA wuxuu ku bilaabmay sida duufaan oo kale - oo aan la saadaalin karin iyo dabacsanaan. Tan iyo dayrta, abuur fara badan oo noocyo kala duwan ah oo xulasho baradho ah Norika (ADRETTA, BALTIK ROUZ, XAALADAHA) macaamiisha ayaa sii hayey gebi ahaanba. Sidoo kale, dhammaan saamiyada abuurka miraha si dhakhso leh ayaa loo iibiyay. GALA. Ka dib waxaa jiray buul, ka dibna mar labaad muddo baahi loo qabay, ilaa yaraanta ba'an ee noocyada la doonayo iyo mugga.
Maxaa gunaanad ah oo la samayn karaa marka la dhammaystiro xilliga iibka noocan oo kale ah? Sida iska cad, beeralaydu waxay bilaabeen inay si taxadar leh uga fikiraan barnaamijyadooda wax soo saarka waxayna iibsadaan abuurka horay. Waxaa jiray koror ku yimid xiisaha noocyo cusub: inbadan waxay heleen dufcado yar yar oo loogu talagalay dhir jarista.
Waa in la ogaadaa in soosaarayaasha beeraha ay u dhawaadaan xulashada noocyada si taxaddar leh, iyagoo diiradda saaraya habkooda qiimeynta.
Shuruudo Xulista Kala Duwan
Maxaa marka hore tiriyaa? Khabiiro ku takhasusay NORIKA-SLAVIA ayaa sameeyay liiskan shuruudo ku saleysan khibrad balaaran oo ku saabsan la xiriirka beeraleeyda inta lagu guda jiro safarada beeraha, iyo sidoo kale salka ku haynta falanqaynta warbixinnada jawaab celinta ee soosaarayaasha beeraha u diraan shirkadeena goosashada ka dib iyo dhamaadka waqtiga kaydinta.
- wax soo saar;
- caabbinta waxyeelada farsamada;
- iska caabinta cudurada iyo sababaha deegaanka ee xun;
- haynta tayada (sida loo keydiyo);
- dheelitirka digriiga ka hooseeya baadiyaha;
- suuq suuqgeyn: sida ay u egtahay daaqadda / daaqada / la dhaqay;
- baahida loo qabo noocyada kala duwan iyo qiimaha iibka;
- faa'iidooyinka marka la barbar dhigo kuwa kale (hal koox bisil ama diir isku mid ah qaabka / midabka).
Tirada tilmaamayaashu aad ayey u badan yihiin, maxaa yeelay soosaaruhu wuxuu u baahan yahay inuu koro wax soo saar la kulma rabitaanka macaamiisha casriga ah ee dalbanaya, taas oo muuqaalka soo jiidashada leh ee digriiga iyo dhadhankoodu ay muhiim yihiin.
Maanta, way fududahay in la xasuusto badeecad la jecel yahay oo keliya ma aha naqshadeynta baakadaha: baakadaha leh baradho baakaysan, soosaarayaasha badankood waxay bilaabeen inay muujiyaan magaca noocyada kala duwan. Sidaas awgeed, soosaarka beeruhu, oo ay ku jiraan noocyo leh qiime sare oo baahida macaamiisha ee safkiisa, ayaa hela fursad ay ku iibiyaan dalagyada qiimo wanaagsan.
Ka hor tag suuqa
Dhanka kale, waxbadan ayaa lagu gaari karaa marka hore suuqa.
Baradhada kala duwan ee baradhada sanadka 2019 GALA kaalinta koowaad ka galay darajayn ee horjoogeyaasha beeraleyda dalagyada beeraha marka laga hadlayo abuuritaanka Xiriirka Ruushka. Waxay qaadatay qiyaastii shan sano (noocyada kala duwan ee lagu daray diiwaangelinta sanadkii 2008) in GALA ay u aqoonsadaan beeraleyda ka kala yimid Russia oo dhan. Taasi waa sababta aan ugu talineyno inaad fiiro gaar ah u yeelatid badeecadihii ugu dambeeyay ugana qeybqaadato barnaamijka tijaabada ee noocyada xulashada ee NORIKA. Khadka wax soo saarka ee NORIKA waxaa jira noocyo kale oo balanqaad leh oo leh astaamo wanaagsan. Kuwa ugu caansan - XAALADAHA, CODKA, BALTIK ROUZ, Inar, FIDELIA, iyo sidoo kale noocyo loogu talagalay KIBIC и PIROL.
NORIKA-SLAVIA waxay adeecdaa mabda'a furfurnaanta ugu badan waxayna marwalba diyaar u tahay wadahadal, inbadan oo ka mid ah macaamiisheenna waxay u yimaadaan beero abuur ka hor inta aysan heshiis gaarin (waxay ka hadlayaan dufcaddii laga sameeyay xiriirka Ruushka), iyaga laftooda waxay u qaadaan tijaabooyin baaritaan dheeri ah (falanqeynta qaaxada, falanqaynta caabuqa qarsoon, maxkamadaynta soo saarid, iwm. ka dibna go'aan ka gadashada oo keliya. NORIKA-SLAVIA waxay soo gabagabeeysaa heshiisyada badankood ee lala galo macaamiisha joogtada ah, taas oo si toos ah u muujineysa in macaamiisha ay ku qanacsan yihiin natiijooyinka iskaashiga.
20 sano Russia
Bishii Maarso 2020, NORIKA-SLAVIA LLC, wakiilka rasmiga ah ee NORIKA Nordring-Kartoffelzucht iyo Vermehrungs GmbH (Jamhuuriyadda federaaliga ah ee Jarmalka) oo ku taal dhulkeeda Jamhuuriyadda Federaalka, waxay u dabaaldegtay sannad-guuradeedii labaatanaad. Intii lagu gudajiray wakhtigan, shirkaddu waxay qabatay shaqo aad u weyn oo ah faafinta iyo ballaarinta khadka kala duwan ee NORIKA ee Ruushka (ilaa maantadan, Diiwaanka Gobolka ee Guulihii xulashada ee loo oggol yahay adeegsiga ayaa ka kooban 35 nooc oo xulasho ah NORIKA).
Sannadkan, shirkadda waxay codsaneysaa imtixaannada diiwaangelinta Gobolka ee saddex nooc oo cusub, oo labo ka mid ah loogu talagalay in lagu karsado xawaashka (LINUS и IKARUS) iyo hal miis (DABKA BALTIC).
LINUS и IKARUS - noocyada xilliga badhtamaha ee leh istaarijka sarreeya, u janjeersada in la madoobaado iyo waxyaabo hooseeya oo yareeya sonkorta, taas oo damaanad qaadaysa natiijo aad u wanaagsan ka dib markay shiil. Waxaa lagu gartaa nasasho dheer.
DABKA BALTIC waxaa lagu kala gartaa diirka cas ee quruxda badan ("dabka" magaca ma ahan shil), dheelitirka dalaga iyo suuq geynta sare ee digriiga waxaa sidoo kale loo aanayn karaa faa'iidooyinka. Waxsoosaarka suurtagalka ah sidoo kale wuxuu marayaa heer hagaagsan (sanadkii 2017 oo loo dhigay 820 kg / ha). Noocyadu waxay leeyihiin darajo wanaagsan oo ah dhadhanka, nooca karinta B, saxarka uma nugul mugdi ka dib karinta. Wuxuu adkeynayaa abaarta muddada-gaaban.
Kulamo ay la leeyihiin beeralayda
Xagaagan, khabiirada NORIKA-SLAVIA LLC, sidii sanadihii hore, waxay qorsheeyeen inay si firfircoon uga qeybgalaan munaasabadaha warshadaha si ay uga hadlaan faa iidooyinka iyo astaamaha noocyada cusub ee shirkadda si toos ah duurka, halkaasoo qofkasta si madaxbanaan u qodo, qiimeyn karo suurta galnimada tan ama taasi noocyo, weydii su'aalaha khubaradeenna takhasuslaha ah iyo, laga yaabee, hore u sii sii buugga mugga (sida lagu muujiyey xilli-ciyaareedkii hore ee iibka, tani waa mid ku habboon).
Nasiib darrose, dhacdooyin badan ayaa la baajiyay cudurkan dartiis. Maanta, khubaradeena khaaska ah waxay qorsheynayaan inay kaqeyb galaan dhowr Maalmo Field.
Waxaan si dhakhso leh kuugu wargalin doonaa taariikhaha iyo goobaha dhacdooyinkaas ka galaan degelkeena. norika.ru
Xilligan waxaan soo bandhigi doonnaa noocyo noocaas ah soosaarayaasha beeraha sida: BALTIK ROUZ, CODKA, VENDI, GALA, Inar, XAALADAHA, SAFIA, FIDELIA и Dalxiis. Astaamahooda waxaa laga heli karaa websaydhkeena, iyo sidoo kale adoo fiirinaya aaladaha joornaalada.
Waxaan rabnaa in aan uga mahadnaqno dhammaan asxaabteena, shuraakadayada, macaamiisha danta ay ka leeyihiin shirkadeena iyo iskaashiga, sababtoo ah Guul darrooyinkayadu waxay si toos ah ugu tiirsan yihiin adiga oo keliya! Had iyo jeer waan ku faraxsan nahay inaan su'aalo helno oo diyaar ayaan u nahay inaan uga jawaabno qaab adiga kugu habboon. Waqti wanaagsan qaado!
Tags: 2020 .2shuruudaha xulashada noocyada baradhadanoocyo baradho cusubNORICA-SLAVIA